Kuberekwazve Mucheche Mwana, Upenyu Hupenyu hweMwana Dhori, Silicone Kuberekwazve Mucheche - Geshuo
Mucheka Muviri Unoberekwazve Madhora
18 ″ Jira Muviri Wakaberekerwa Madhora
22 ″ Jira Muviri Wakaberekerwa Madhora
Yakazara Muviri Silicone Reborn Doll
18 ″ Yakazara Muviri Silicone Kuberekwazve Madhora
23, Yakazara Muviri Silicone Akaberekwazve Madhora
Gore rechisere, isu tinogara tiri munzira, zvakangofanana nekuti isu vanhu takaitirwa kuti tinzwe nzara uye kuda kudya, matoyi anogara achionekwa nevana mukusaziva kwedu. akaisvonaka maChinese echinyakare madhiraini, asiwo emhando dzese dzakapfava silicone dhora matoyi edzidzo, EQ kudzidziswa, matoyi anonakidza.
Tinoshuvira kuti vana vawedzere kuombera uye vanzwe vanhu vakuru vachivaudza kuti ivo vakanaka, vakangwara uye kuti vari kuita zvakanaka, kubvumira vana kuti vakure munzvimbo ine zvitsigiro, mvumo. Chokwadi kupenya pakati pevabereki kuti vadzidzise vana vavo nekunakidzwa vachitamba. Vanozvarwa patsva matoyi emadhora akawanda ehukama kupfuura zvekutambisa chete.
ZIYIUI 22inch / 55cm Yakaberekwazve Madhora Chaiyo Sof ...
Kukura kwedhora: 22 inch / 55 cm Kurema: 3.3LB (1.5kg). Dhori inogona kupfeka hembe dzichangoberekwa (0-3cm). Magnetic pacifier inogona kukwana muromo. Dzakagadzirwa nemaoko zvidhori uye mbatya dzedhongi, yakanakisa zuva rekuzvarwa revana. Chinyorwa: nyoro silicone vinyl muviri, wakagadzirwa wekunze silicone vinyl, nyoro kubata asi zvishoma zvakaoma. Ingova neyakaomarara uye kuomarara kana ukamudzvanya. Inogona kupinda mumvura kuti igeze, haugone kugeza nevana vako. Iyo chidhori inogona kugara nekurara pasi nyore, asi haigone kumira uye sp ...
ZIYIUI 22 Inch 55 CM Chaiyo Hupenyu Akaberekerwa Mudiki D ...
ZIYIUI 18 48 CM Akaberekwazve Mwana Dhora Silicone Nyoro ...
Iyo yakazvarwa patsva iri Approx 18 inches / 48 cm kubva pamusoro kusvika kumusoro, uye zviyero 3 Lbs anenge. Yakakwira mhando Silicone vinyl, yakapfava uye yakaoma vinyl Musoro, maoko nemakumbo chikamu zvigadzirwa zve silicone. Muviri uyu mutumbi wedonje, wakapfava kwazvo, wakasununguka. Makumbo emadhiri anogona kufambiswa uye anogona kugara akarara pasi asi asingagoni kumira, haagone kutaura. Ongorora: ichi chidhori hachigone kuiswa mumvura Maoko nemakumbo zvinogona kusimudzwa zvichikwira, uye mwana anogona kugara akarara pasi, haagone kuchema, kuseka uye ...
ZIYIUI20 50 CM Yese Muviri Silicone Yakagadzirwa nemaoko Reb ...
Iyo yakazvarwa patsva iri Approx 20 inches / 50 cm kubva pamusoro kusvika kumusoro. Yakakwira mhando Silicone vinyl.Muviri wakazara wakagadzirwa nesilicone zvinhu.Muviri wakaomesesa zvishoma pane wedonje chidhori. Makumbo emadhiri anogona kufambiswa uye anogona kugara akarara pasi asi asingagoni kumira, haagone kutaura. chidhori ichi chinogona kuiswa mumvura nekugezeswa nemwana wako. Bvudzi: Bvudzi rakagadzirwa nevanhu kubva kuJapan, rakaisirwa neruoko, kutendeseka kwakakwirira, rinokwanisika, rinogona kusanganiswa Rinoenderana nezvinodiwa kuchengetedzwa kweASTM F963 uye EN71 ye ...
ZIYIUI Yakagadzirwa nemaoko Nyoro Silicone18 padiki Kuberekwazve Bab ...
Saizi: 18 inch (45 cm); Kurema: ingangoita 1.2KG (2.6LB). Iyo chidhori chakagadzirwa nemaoko, ichave imwe kukanganisa muhukuru uye huremu. Musoro, maoko nemakumbo: Soft Simulation Silicone Vinyl, Muviri: Mucheka wakazadzwa nedonje, wakapfava kwazvo. Bvudzi: Yakakwira Hwakanaka Mohair, YeMukati kuisirwa, inogona kusuka uye kupfeka kumusoro.Ichi chi mucheche chidhori, saka vhudzi iri zvishoma zvishoma Maziso: Yakakwira mhando Acrylic, haigone kubwaira.Muromo: Magineti, Ichauya iine magnetic pacifier inokwana muromo. Zvipfeko zveDhora: Zvakagadzirwa nemaoko.
ZIYIUI 22 55 CM Silicone Yakapfava Lifelike Yakagadzirwa nemaoko ...
Iyo yakazvarwa patsva iri Approx 22 inches / 55 cm kubva pamusoro kusvika kumusoro, uye zviyero 3 Lbs anenge. Yakakwira mhando Silicone vinyl, yakapfava uye yakaoma vinyl Musoro, maoko nemakumbo chikamu zvigadzirwa zve silicone. Muviri uyu mutumbi wedonje, wakapfava kwazvo, wakasununguka. Makumbo emadhiri anogona kufambiswa uye anogona kugara akarara pasi asi asingagoni kumira, haagone kutaura. Ongorora: ichi chidhori hachigone kuiswa mumvura Maoko nemakumbo zvinogona kusimudzwa zvichikwira, uye mwana anogona kugara akarara pasi, haagone kuchema, kuseka uye ...
Rudzi Rutsva rweSilicone Rakaberekwazve Vacheche
Kunyangwe iwe uchidanana nevanozvarwa patsva vacheche kana iwe sarudza ...
Chii Chinonzi Kuberekwa Zvidhori?
Vanozvarwa patsva Madhora Vanozvarwazve Vacheche Madhora akafanana neakafanana neupenyu, h ...
Kwokutenga chaiyo chaiyo lifel ...
Kana iwe uri mutsva mukutora wakaberekwazve vana madhiraini, kana iwe uine ...
Vanozvarwa patsva Madhora
Kero:Shijiazhuang Geshuo Kutengesa Co, Ltd